5 Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Dabeecadda reer Yurub iyo muuqaallada dhulbahante ayaa dhiirrigeliyay sheekooyinka sheekooyinka. Dhulalka ballaaran ayaa hoy u ah wax lala yaabo wadooyinka hortayada taasi waxay horseed u tahay qaar ka mid ah cajaa’ibyada aan caadiga ahayn ee adduunka. Godad-la-xusuusiyay ee Hungary, Grand Canyon oo leh biyo turjum leh oo ku yaal Faransiiska, jasiiradaha-barafka ee Austria, iyo buur dusheeda qaabkeedu yahay Talyaani, waa 5 waxyaabaha ugu yaabka badan ee dabiiciga ah ee Yurub.
Waxyaabaha cajiibka ah ee dabiiciga ah ayaa neeftaada kaa qaadi doona, oo ay bixiyaan muuqaal cajiib ah fasaxa ugu fiican Yurub. Haddii aad xiiseyneyso socodka ama aad qaadatid baabuurka fiilada, kuwan 5 yaababku waa fudud yihiin booqashada mid kasta safarka Yurub, ugu yaraan hal jeer nolosha.
1. Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub: Eisriesenwelt, Austria
Waxaa laga yaabaa inaad xasuusato Salzburg oo ka socota Codadka Muusikada iyo carruurta Von Trapp oo u heesta buuraha. laakiin, ka hooseeya buuraha Hochkogel, wuxuu qariyey godka ugu weyn Yurub. Godka barafka ee Eisriesnwelt Gudaha Austria waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan Yurub. Iskusoo wada duuboo, Muuqaalka 3000o ee mitir laba jibaaran waa barafka, Eispalast.
Dhacdadan dabiiciga ah waa godka ugu weyn dunida barafka, waxaana ku abuurmay baraf ka soo baxa dhagaxa ama nuuradda dhulka hoostiisa.
Sideen ugu tagi karaa godka barafka ee Eisriesnwelt?
Waxa xiiso lihi godkan 40km waa tareen ka fog Salzburg, tareenadu waxay baxaan saacad kasta. Ka sokow Werfen, waxaa jira a 15 daqiiqado 'bas yar fuul godka. Waxaa intaa dheer, dalxiisayaasha badankood ilaa Jarmalka, ma helin yaabkan dabiiciga ah, si aad uga mid noqon karto sahaminta khaaska ah. Waad sameyn kartaa 4-ta saacadood ee aad kor u soo kicin laheyd ama 3 saacadaha safarka xasilloonida leh oo lagu raaco baabuurka fiilada.
2. Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub: Verdon Gorge, France
Grand Canyon ee Faransiiska ayaa ku fidsan koonfurta gobolka ee Provence. Dhagaxyo dillaac iyo dhagxaan, u samee asal cajiib ah biyaha harada harada ah ee aan la rumaysan karin. Sidaa darteed, Magaca yaabka yaabka leh ee dabiiciga ah 'Gorges du Verdon' macnaheedu waa Gorges cagaaran, af faransiis.
Harada cajiibka ah ee Provence waxay ku habboon tahay dabaasha xagaaga iyo qaboojinta, iyo sidoo kale janno socod baraf ah. Waxaa jira 1500 raadadkii loogu talagalay fuulitaanada xiisaha leh ee doonaya inay ka helaan qadarinta reer Yurub yaabka xagga sare. Sidaas, waad doorataa hadaad kaliya rabto inaad ku qubeysato qorraxda doon saaran, ama lagu ogaado lugta.
Sideen Ku Gaadhayaa Gorges Du Verdon?
Magaalada ugu dhow waa Moustiers-Sainte-Marie, halkaasna waxaad ku imaan kartaa tareen ka yimaada Paris. Ka dib u gal meesha laga galo buundada Pont du Galettes, inuu galo yaabkan dabiiciga ah.
Paris ilaa Qiimaha Tareenka Marseilles
Qiimaha Marseilles ilaa Paris
Marseilles ilaa Clermont Ferrand Qiimaha
3. Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub: Matterhorn, Italy
Monte Cervino oo ku taal Waqooyiga Talyaaniga waa 4,478 mitir heerka badda. Intaa waxaa dheer, Matterhorn wuxuu caan ku yahay qaab dhismeedka muraayadaha qumman. Matterhorn si dabiici ah ayaa loo abuuray markii dhulalkii Afrika iyo Yurub ay si fudud isku garaaceen midba midka kale. Natiijo ahaan dhaqdhaqaaqa dhulkan, Dhagaxii weynaa wuxuu helay jidka ugu sarreeya.
Haddii aad raadineyso khibrad xusuus leh oo ku taal Matterhorn, ka dib joog tuulada igloo ee salka buuraha. Barafka iyo barafka dhagxaanta waxay martigelisaa dadka socotada ah habeen lama iloobaan ah. Hadaad ka baqeyso hargabka, cabitaan ku jira baarka ayaa kuu kululayn doona sida aad u bogaadiso buurta qurxan ee habeen xiddig leh.
Sideen Ku Gaadhaa Matterhorn?
Arintan yaabka leh ee dabiiciga ahi waa uun meesha laga bilaabo safarkaaga yaabka leh. Waad u safri kartaa glacier Matterhorn adigoo safarka tareenka ka yimid Zermatt. Saldhigga tareenka ugu sarreeya ee Yurub, waad u bogi kartaa panaramic-ga 360º ee talyaaniga, Switzerland, iyo France. Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka heli karto sawirka saxda ah xagal kasta guga, xagaaga, ama baraf daboolay jiilaalka.
Basel ilaa Qiimaha Tareenka ee isku dhafan
Geneva ilaa Qiimaha Tareenka Zermatt
Bern ilaa Qiimaha Tareenka Zermatt
Qiimaha Tareenka ee Lucerne ilaa Zermatt
Godadka Aggtelek waa yaab yaab leh oo dabiiciga ah oo ku yaal Yurub. Magaca aan caadiga ahayn waxaa loola jeedaa 'biyo daadanaya' oo ka soo jeeda habka dabiiciga ah ee biyaha ka soo qulqulaya dhagaxa. Sidaas awgeed, isha laga helayo qaababka qurxoon ee godadka cajiibka ah ee Aggtelek park qaranka.
Godka Baradla Domica Cave waa meel 25-KM dheer u jirta nidaamka godka cad ee u dhexeeya Hungary iyo Slovakia. Sidaas oo kale waa a UNESCO World Heritage site.
Sideen Ku Gaadhaa Godadka Baradla Domica?
Godadyada Aggtelek waa 4-saacadood safarka tareenka ka yimid Budapest oo leh isbeddelo. Sidaas, haddii aad tahay qorsheynta safar maalinle ah ka yimid Budapest, wuu yara adkaan karaa.
Qiimaha Tareenka ee Vienna ilaa Budapest
Prague ilaa Qiimaha Tareenka Budapest
Qiimaha Munich ilaa Budapest
Qiimaha Graz ilaa Budapest
5. Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub: Black Forest The, Germany
Caan ku ah geedaha qarsoodiga ah iyo kuwa cufan, ah Kaymaha Madoow ee Jarmalka waa cajaa'ib dabiici ah oo soo jiidasho leh Yurub. Buurtan quruxda badan ee Baden-Wurttemberg waxay dhiirrigelisay halyeeyo badan, sida sheekooyinka Grimm. Halkaani waa meesha aad uga baxdo Baden-Baden spa spa, oo loo galay kayn caan ah oo sheekooyin iyo cuckoos ah.
Hadaad xiiseynayso safar, Triberg Falls, waxay sugayaan dariiq lugeynaya kaynta. Hab kale oo weyn oo lagu baaro cajiibka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee Jarmalka ayaa ku socda hanuunin sababtoo ah waxa ugu dambeeya ee aad rabto ayaa ah inaad lumiso dhulalka culus ee alwaaxdu ku badan tahay..
Gunaanad, kuwan 5 waxyaabaha ugu yaabka badan ee dabiiciga ah ee yurub waa dhamaan waxyaalaha ugu qarsoon aduunka. Sidaas, hubaal waad sahamin kartaa Yurub sida dalxiis oo kale oo caan ah wadada daawashada, ama waad ogaan kartaa oo naftaada u arki kartaa meelaha ugu quruxda badan iyo quruxda badan ee Yurub. Inta badan, muhiim ah, Dhamaan waxyaabahan yaabka leh ee dabiiciga ah waxaa lagu heli karaa tareen iyo habab kale oo gaadiid ah, laga soo bilaabo magaalooyinka dhexe ee Yurub.
Qiimaha Tareenka ee Offenburg ilaa Freiburg
Qiimaha Tareenka Stuttgart ilaa Freiburg
Leipzig ilaa Qiimaha Tareenka Freiburg
Nuremberg ilaa Freiburg Qiimaha Tareenka
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno sidii aad ku heli lahayd sida tareen loogu raaco mid ka mid ah yaababkan dabiiciga ah.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "5 Layaabka Dunida Ugu Fiican Ee Yurub" bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-natural-wonders-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa luqadaha / ja si / fr ama / de iyo in ka badan.
naturalwonder waxyaabaha dabiiciga ah naturalwonderseurope tareen safarka traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany
Uunana socod English Premier League ayaa By tareenka